Dib udhac ku yimid shaacinta liiska Xildhibaanada cusub ee Jubaland – Radio Daljir
Dib udhac ku yimid shaacinta liiska Xildhibaanada cusub ee Jubaland
Agoosto 12, 2019 11:39 b 0
Magaalada Kismaayo ee xarunta mamaulka Jubaland waxaa ka socta xulista Xildhibaanada cusub ee mamaulka Jubaland oo dhawaan doorshada madaxweynaha ay ka dhici doonto magaalada Kismaayo in kastoo khlifaa xoogan uu hareeyay soo xulista baarlamaanka.
maanta ayaa lafilayay in la soo dhamaystiro liiska cusub Xildhibaanada baarlamaanka Jublanad,balse waxa ay dib udhacday maalinta beri ah.
sabbta keentay dib udhaca liiska Xildhibaanada ayaa salka ku haysa khilaaf soo kala dhex galay Guddoomiyaha guddiga doorashada Jubaland iyo kuxigeenkiisa kadib markii Guddoomiye kuxigeenka uu sheegay in aysan ku waafaq sanayn Guddoomiyaha warqada uu udiray beesha caalamka.
Ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland ayaa xalay tagay guriga uu Kismaayo ka dagan yahay Guddoomiye kuxigeenkii guddiga, balse waxaa la sheehay in ay ka waayeen oo uu tagay guriga wasiirka amniga Jubaland.
Odayaasha dhaqanka qaar kood ayaa horay uga soo hor jeestay habka ay wax u wadaan guddigan uu magacaabay madaxweyne Axmed Madoobe.
Saida ay Daljir warar hoose ku helayso waxaa socda dadaalo loogu kala dab qaadayo khilaafka ka dhexjira xubnaha guddiga doorashada Jubaland.
Daljir kala soco wararka doorashada Kismaayo.
Madaxweyne Laftagareen oo magacaabay Guddi soo baara dilalkii ka dhacay Baydhabo